The Irrawaddy's Blog: ကိုရီးယားမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့ မေမြတ်နိုး
ကိုရီးယားမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့ မေမြတ်နိုး
Miss Asia Pacific 2014 မှာ အလှမယ် မေမြတ်နိုးဟာ Miss သရဖူဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးဆုကိုလဲ ရရှိခဲ့ပြီ။ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန် လည် ထွက်ခွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေမြတ်နိုး ဟာ မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပါဝင် သရုပ်
ဆောင်နိုင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်များ အသင်း အထူး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လက်မှတ်ကိုလဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မေမြတ်နိုးက ရရှိထားတဲ့ ဆုကြေးငွေ တချို့ကိုလဲ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပရဟိတတွေကို လုပ်ဆောင်သွားမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
မေမြတ်နိုးရရှိထားတဲ့ သရဖူဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သရဖူလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသဲစွဲ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ မေမြတ်နိုးအနေနဲ့ ကိုးရီးယားမင်းသားတွေနဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တာတွေကို မြင်လာ
Posted in: Eaint Than Zin , အနုပညာ ရပ်ဝန်း
WHY? WHY? WHY? said... :
ကလေးမနဲ့ နီးစပ်သူရှိရင် လက်တို့ သတိပေးလိုက်ပါ။ ကိုရီးယားဒါရိုက်တာတွေ၊ ထုတ်လုပ်ရေးသမားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံကလူတွေမှ လိုက်မမီအောင် တက်သစ်စလေးတွေကို အမဲဖျက်သလို ဖျက်ဆီးလေ့ရှိတယ်။ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ဆို ကားကြီးပေးရိုက်မယ် ပေးရိုက်မယ်နဲ့ မာစတာကြီးတွေက ခေါ်ခေါ် အိပ်လိုက်တာ၊ လူပေါင်း ၆၀ ကျော်လောက်ထိရောက်သွားတဲ့နောက်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားရှာတယ်။ သူ့ကြောင့် ကိုရီးယားတစ်ပြည်လုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက်ဖြစ်ပြီး အဲဒီမသာကောင်တွေကို ဝိုင်းပြီး ထောပနာကြတာ အကြာကြီးပဲ။ ၂၀၀၈ လား ၂၀၀၉ လားကပါ။ ကောင်မလေးက တကယ်ကို လှလဲ လှရှာပါတယ်။ သူ ရုန်းထွက်တတ်တဲ့နည်းနဲ့ ထွက်သွားရှာတာပါ။ ကိုယ့်သမီးလေး အရွယ်မို့ စိုးရိမ်တာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပါပဲ။